२०७५ कार्तिक ३० शुक्रबार ०७:०२:००
काठमाडौं । कञ्चनपुरकी १३ वर्षीय किशोरी निर्मला पन्तलाई न्यायको माग गर्दै गएको आइतबारदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुर अगाडि धर्नामा बसेका बाबु र आमा बिरामी परेका छन् । परिवारका अन्य सदस्यले बाह्रखरीलाई जानकारी गराएअनुसार चिसोका कारण दुवै जनाको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएको छ भने बाबु निकै नै अस्वस्थ भएका छन् । उनीहरु धर्नामा बसेको शुक्रबार छैठौं दिन हो ।
पीडित परिवारलाई चिसोको समश्या देखिएपछि बिहीबार स्वास्थ्यकर्मीको टोली धर्नास्थलमा पुगेर स्वास्थ्य परीक्षण गरेको थियो । आमा दुर्गादेवीले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा छोरीको न्यायको लागि आफूहरु धर्नामा बस्दा पनि राज्यले सुनुवाई नगरेको गुनासो गरिन् ।
धर्नाको पाँचौं दिन सम्मपनि सरकारका कुनैपनि व्यक्ति आएर आफूहरुको माग बारेमा नसोधेको जनाइन् । निर्मलाका पिता यज्ञराजको रक्तचाप घटेर ६७ पुगेको चिकित्सकको भनाई छ ।
कमजोरी र समयमै खाना नखाएका कारण निर्मलाका बाबुको स्वास्थ्य अवस्था एकदमै बिग्रिएको महाकाली अञ्चल अस्पतालका डा. किशोर बोहराले सञ्चारकर्मीहरुलाई जानकारी दिएका छन् ।
“समयमै खानपिन नहुँदा र अनिंदोका कारण बाबुको अवस्था निकै कमजोर छ,” डा. बोहराले भने “उहाँमा ज्वरो पनि देखिएको छ । हामीले रगत र पिसाब जाँचका लागि प्रयोगशालामा पठाएका छौ ।” निर्मलाका बाबुले आफूहरुले न्याय माग्दा पनि सरकारले उपेक्षा गरेको आरोप लगाए ।
“हामीले अरु केहि मागेका होइनौं,” यज्ञराजले भने “न्याय माग्दा त यो अवस्था छ । मौन बसे कसरी न्याय मिल्छ होला ?,”उनले बाह्रखरीसँग भने ।
यसैबीच, प्रहरीले निर्मलाको हत्याको घटनामा शंकाको घेरामा रहेका चार जना व्यक्तिको डीएनए रिपोर्ट आज शुक्रबार सार्वजनिक गर्ने जनाइएको छ । विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट सो रिपोर्ट बिहीबार साँझ कञ्चनपुर पुगेकाले आज शुक्रबार सार्वजनिक गरिने प्रहरीले जनाएको छ ।